Isilinganiso sakho sokuguquguquka kwePlastiki | Ecobricks.org
Abantu bonke bayaqaphela ukuthi singenza kangcono kangcono kunezindlela ezidala zokuthenga, ukusebenzisa nokulahla. Njengoba ukulahlwa kwemfucumfucu kanye namapulasitiki asepulasitiki e-ocean akhule kakhulu futhi amakhulu, kuyacaca ukuthi imibono yezimboni ‘yokuvuselela’, ‘ukuthenga okuluhlaza’ nokunciphisa ukunyathelisa kwethu ’empeleni inyathela iplanethi. Manje sekuyisikhathi sokushintsha: kusukela ezinyathelweni eziyinyumba kuya emithanjeni enambewu! Esikhundleni sokunciphisa umthelela wethu omkhulu, sekuyisikhathi sokwandisa ukuvuselelwa kwethu okuluhlaza! Futhi iplastiki yindawo okufanele uqale ngayo.
Siyakwamukela ku-Transition Plastic!
Siphila eminyakeni lapho kungenakwenzeka ukugwema ipulasitiki. Okuningi kwalokho esikuthengayo nokukudlayo kungenziwa kusuka epulasitiki noma kuhlanganiswe kuyo. Siyaqaphela ukwehluleka kwezinhlelo zethu zezezimboni emhlabeni wonke ukuzinakekela kahle. I-Ecobricks ayisivumeli nje ukuba sinakekele ipulasitiki yethu yangakini, kuyindlela yokuguqula ukuvuselela izinto eziphilayo eziphelile. Ukuhlelwa kwemvelo kusenza sikwazi ukuhola ngesibonelo, hhayi kuphela ukuhlala udoti oluthile – kodwa ukuya phambili! Ukuqaphela ukulinganisa kwakho kwePlastiki yeTjhuguluko leNdlela yindlela yokutshela ukuthi usekuphi kwesilinganiso segrey kuya eluhlaza.
Ukusetshenziswa kwakho kwePlastiki
Njengoba sihamba ngempilo yethu yanamuhla sisebenzisa ipulasitiki ngokuphuza – ukuphuza esitsheni, sisebenzisa isikhwama sokuthenga ukudla kwethu, sithatha ipulasitiki enqamula i-candy. Iningi labantu, imiphakathi, imizi kanye nezinkampani azikwazi ukuthi ingakanani ipulasitiki abayidla njalo ngenyanga noma ngonyaka. Ukusetshenziswa okungenalutho kuhlobene ngokuqondile nama-dumps akhula njalo, ama-plastic patches, kanye nemifula eguqulwe emhlabeni jikelele.
Okunye okuyingxenye yokuphila kwansuku zonke, kunika abanye ipulasitiki – ukufaka iphakheji ku-tape, ukuthenga isipho, ukushiya amathoyizi epulasitiki ukuze uthole usizo, noma ukubeka amabhodlela epulasitiki ibe ibha yokuvuselela. Kuzo zonke lezi zimo sithumela ipulasitiki yethu kwabanye abantu nezindawo. Kuzophela kuphi lokhu epulasitiki? Kuhle … ucwaningo lubonisa ukuthi ngisho nakwamanye amazwe anesistimu ephakeme yokubuyisela kabusha i-tech, amazinga okuvuselelwa kabusha aphansi, futhi iningi laleli posizi lihanjiswa ezindaweni ngaphandle kokuvuselela izinhlelo. Ukubuyisela kabusha kubangela ukuthi ipulasitiki ilahlwe futhi iphele ku-biosphere.
I-Ecobricks ingenye yezindlela ezimbalwa kakhulu zokubamba iplastiki. I-ecobrick ingagcini nje ukunciphisa indawo enamathele epulasitiki ehlanganiswe izinkulungwane eziphindwe kabili, isebenzisa ubude bepulasitiki ukuba igibe kuze kube nini nanini. Ngakho-ke ipulasitiki igcinwa ngaphandle kwezinhlelo zezimboni ezihlulekayo, futhi isebenzise ngendlela efanele, endaweni yangakini. I-Ecobricks, ngokungafani nezinye izinqubo eziningi zokuhamba ngebhayisikili, zihlangabezane nezindinganiso ze-design-end -able-to-cradle yekhulu leminyaka. I-Ecobricks iphumelela kakhulu ekuthatheni amapulasitiki emiphakathini yezimboni kanye neyomhlaba wonke, ukuthi iphumelele ‘sequestered’ (kusukela ku-Latin ‘sequestrate’: ukubeka ngokuphepha). Ngamanye amazwi, uma kuthathwe ibhodlela, iplastiki ayikho ndawo! Ngendlela efanayo ukuthi izihlahla kanye ne-‘quequer ‘yehlathi’ C02 (okungukuthi kuyigcina), singakwazi ukufaka ipulasitiki.
I-Ecobricks isinika amandla okunakekela ipulasitiki yethu – okukuvumela ukuba uyeke ukuthumela amanye amapulasitiki akho bese uhlala udoti! Noma kunjalo, ayigodli lapho. Ngokuqoqa nokupakisha ipulasitiki labanye, ungathatha uphinde ubeke ipulasitiki eyengeziwe kunokuba uzidle.
I-PTR yenziwe izingxenye ezine: Ukusetshenziswa kwakho kwepulasitiki nokukhiqizwa kanye nokwehliswa kwakho komuntu nokwehla komphakathi.
Ipulasitiki ibonisa ukuthuthukiswa kokungazi lutho kuleli khulu leminyaka elidlule eliye lonakalisa izinga lokuphila kweplanethi yethu. Kodwa … inkinga isisombululo ngaso sonke isikhathi. Isicelo esihle kunazo zonke ze-ecobricks ukwakha izingadi! Sibabiza ngokuthi i-Food Forest Play Parks. Ngakho-ke, kukhona ukuxhumana okuqondile phakathi kokwenza i-ecobricks nokuvuselelwa kwezindawo ezihlukahlukene ezinhlobonhlobo zezinhlobo ezindaweni zasemadolobheni, kanye nokweba imigomo ye-permaculture ezindaweni ezikude kakhulu emhlabeni.
Qalisa Ukubala I-PTR Yakho
Bhalisela ku-Ecobricks.org ukuze udale i-akhawunti yakho yamahhala – sizokuhamba ngenqubo yokusetha i-PTR yakho. Lokhu kuzobandakanya ukusindisa, ukuhlanza, ukomisa, ukugcina bese ulinganisa ukusetshenziswa kwakho kweplastiki njalo ngenyanga. Ungakhathazeki, isimiso sethu sizokukhumbuza futhi sikusize uqonde izinombolo zakho. Khona-ke, njengoba wenza i-ecobricks bese uyibhala ohlelweni lwethu, uzokwazi ukubona igraph yakho ye-PTR ephilayo, bese ulandelela inqubekelaphambili yakho njengoba unyaka uqhubeka.
Uhlelo lwethu lwe-Catalyst for Companies (Ukuza maduzane)
Kungani i-Ecobrick? I-Ecobricks njenge-Sequestration
I-Cradle to Cradle Design: Yeka indlela i-ecobricks evuselelwa ngayo ngokuyisisekelo
Recycling the Evil Illusion: Ukukhohlisa okuyisisekelo nokuhluleka kokusebenzisa kabusha
Okulandelayo: Kungani i-ecobrick
“Uma sicabanga ngezinto eziba nempilo eminingi, ukubeletha ukuzala, singakwazi ukuklama izinto ezingabuyela kuyo yonke imvelo noma ubuyele embonini kuze kube phakade … I-Stone Age ayizange iphele ngoba abantu baphume ngamatshe. Kwaphela ngoba sekuyisikhathi sokucabanga kabusha ngokuthi siphila kanjani. “- UWilliam McDonough
Ngokushisa kwelanga kanye namanzi, ipulasitiki iphuka ibe yizinyosi zemvelo. Kudingeka siqaphele!
Amamojula e-Ecobrick ingenye yezinto ezilula kakhulu, ezisheshayo futhi ezisebenzayo ze-ecobricks.